UMBALA WEWHEEL (ISIKHOKELO SOKUDIBANISA UMBALA WOKUGQIBELA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umbala weWheel (Isikhokelo sokuDibanisa uMbala wokuGqibela)
Umbala weWheel (Isikhokelo sokuDibanisa uMbala wokuGqibela)
Wamkelekile kwiphepha lethu kwivili lemibala kunye nendlela yokusebenzisa imibala ehambelana neprojekthi yoyilo lwangaphakathi. Kubomi bemihla ngemihla, ilizwe lethu ligcwele imibala. Ukusuka kwimithi eluhlaza ukuya emafini amhlophe, ukuya elangeni emthubi kunye neenkqwithela ezingwevu, sintywiliselwe kubuhle obubonakaliswa yimibala. Siphefumlelwe ngokwendalo, imibala siyiqhelanise nempahla yethu, amakhaya, ukuzilungisa, izinto zokudlala kunye nezixhobo zemfundo. Sifunde indlela yokudibanisa kunye nokutshatisa imibala ukuseta imeko ethile, umxholo, okanye uhlobo.
Amehlo omntu kunye nengqondo ziguqula izigidi zemibala eyahlukeneyo. Izifundo zibonisa ukuba sibona amanqanaba e-1000 omnyama okhanyayo, ama-100 amanqanaba obomvu-luhlaza, kunye nama-100 amanqanaba aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokuqinisekileyo kunzima ukufumanisa umbala ngamnye okhoyo. Kuyilo lwangaphakathi, ivili lombala libonelela ngemibala ebonakalayo ngemibala ehlelwe ngokobudlelwane babo be-chromatic. Ikwabizwa ngokuba sisangqa sombala, ivili lemibala lisinceda ukuba sibone ukuba yeyiphi imibala edibanisa kakuhle neminye, kwaye ingeyiyo.
Kuyilo lwangaphakathi, imibala ibaluleke kakhulu. Umdibaniso ofanelekileyo wemibala uguqulela kwinjongo ethile yegumbi. Umzekelo, amagumbi okulala ahlala enziwe ngemibala epholileyo enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ngwevu, luhlaza, nemfusa. Bathumela umyalezo wokuba igumbi lelokuzonwabisa nokuphumla. Nangona kunjalo, amagumbi anemisebenzi ephezulu ahonjiswe ngemibala eqaqambileyo enje ngombala obomvu, orenji, okanye tyheli. Igumbi elinamathoni amnyama lithumela umyalezo wobuzaza, ubuhle kunye namandla, anokulungela iiofisi zasekhaya okanye isifundo. Iithowuni zeorenji ziguqulela kwimpilo, ulonwabo kunye nolutsha olulungele amakhitshi okanye amagumbi okuzivocavoca. Ngaphandle kokwazi, imibala inefuthe kwiimvakalelo zethu ngokungena kwigumbi.
Imibala yokuGqibezela ivili leMibala
Uyisebenzisa kanjani iVili leMibala
Itshati yamaVili eMibala
Imvelaphi yevili lemibala
Ngo-1666, uMhlekazi uIsaac Newton wenza ulingelo kwipism apho wafumanisa ukuba ukukhanya okumhlophe qwa kunemibala emininzi. Oku kuye kwabizwa njengevili lokuqala lombala. Ivili lombala likaNewton linemibala eli-12. Kule minyaka idlulileyo, izazinzulu kunye namagcisa enze uphuculo lokwenza ivili lemibala libonakale njengangoku.
Nazi Imibala ephambili ye-3: bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka, namthubi . Le mibala ayinakwenziwa ngokudibanisa eminye imibala. Imibala yaseprayimari ikwabizwa ngokuba yimibala esisiseko ngenxa yokuba sisiseko seminye imibala. Kwivili lemibala, imibala yesibini ibekwe phakathi kwemibala emibini ephambili. Ziibhloko zokwakha zayo yonke eminye imibala kwivili.
Le mibala yenziwe ngokudibanisa imibala ephambili. Inkqubo ye- Imibala yesibini yesibini iluhlaza, orenji, nemfusa . Oluhlaza kwenziwa ngokudibanisa iblue nephuzi. Iorenji yimveliso yokuxuba umbala obomvu notyheli, ngelixa obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka kudala imfusa.
I-orenji e-orenji, obomvu-orenji, bomvu-bumfusa, luhlaza-mfusa, luhlaza-luhlaza, nobutyheli-luhlaza zezemibala ephezulu. Le mibala yenziwe ngokudibanisa umbala wokuqala kunye nombala wesibini, yiyo loo nto unamagama amabini. Imibala ephezulu ikwabizwa ngokuba yimibala ephakathi. Kwivili lemibala, imibala ekumgangatho ophezulu ibekwe phakathi kwemibala ephambili kunye nemibala.
Inkqubo yombala ligama elisetyenziselwa ukuchaza indibaniselwano efanelekileyo yemibala kwivili lemibala. Kumhombiso wangaphakathi, yindibaniselwano okanye ulungiselelo lwemibala ukuze ilingane umxholo othile, isitayile okanye uhlobo. Eyona njongo iphambili yezikimu zemibala kukudala isitayile kunye nesibheno.
I-Monochromatic kuthetha ukuba uya kusebenzisa umbala omnye kuphela ukusukela kumthunzi wawo okhanyayo ukuya kumnyama wawo. Umzekelo, ukuba ufuna ukusebenzisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kwigumbi lakho kwisikimu se-monochromatic, unokukhetha ukuba neendonga eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye neempawu ezimnyama eziluhlaza njengemqamelo, izixhobo, iiragi, kunye neentyatyambo.
Imibala engafaniyo inemibala emi-2 ukuya kwezi-6 ehlala ecaleni okanye isondelelene kwivili lemibala. Kukho umbala omnye odla ngokubakho. Umzekelo luhlaza-buluhlaza, luhlaza, nephuzi-luhlaza. Le mibala ihlala kwicala lasekhohlo kwivili lombala. Kwisikimu sombala ofanayo, kuhlala kukho umbala omkhulu, umbala wesibini oxhasayo, kunye nombala ocacileyo.
Imibala ehambelana nayo ihlala ijongane kwivili lemibala. Le mibala, xa idityaniswe kunye, ivelisa ezona zilungileyo kwezinye. Imibala ehambelana nayo ikhokelela kwimibala eyahlukileyo. Imizekelo yemibala ehambelana nayo ityheli nemfusa, luhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji, kwaye bomvu luhlaza. Imibala ehambelana nayo ivelisa umahluko omkhulu kunye nozinzo oluphezulu.
Ukwahlula ukusebenzisa okuhambelana nemibala emi-3. Omnye wemibala emithathu ngumbala osisiseko. Eminye imibala emibini ichasene nombala wesiseko kwivili. Umdibaniso wemibala unikezela ikhontrakthi ngaphandle kokuqina kwemibala ehambelana nayo. Umzekelo wokwahlulwa okuhambelana nayo luhlaza okwesibhakabhaka, tyheli-orenji, kunye nobomvu-orenji. Eli cebo lilungele abaqalayo kuba kunzima ukulifumana ngokungalunganga. Xa ukhetha umbala osisiseko, ukhetha imibala emibini ejongene nevili elisondeleyo, okanye oko sikubiza ngokuba yimibala engummelwane.
Iivenkile zomtshato ezisetyenzisiweyo kufutshane nam
Iskimu sombala wetetradic esaziwa njengemibala ehambelana kabini sesona sikimu sinzima ukulinganisa. Esi sikimu sinemibala emine eyenziwe ziiseti ezimbini zemibala ehambelana. Umzekelo wale skimu luhlaza okwesibhakabhaka, orenji, tyheli kunye nemfusa. Esi sikimu sithathwa njengesona sisityebi kodwa sinzima ukudibanisa. Ukuba yonke imibala emine ilinganisiwe, iskimu siya kujongeka singalingani. Ubuqhetseba kwesi sikimu kukukhetha umbala omnye ukuba ubalasele kwaye woyise yonke eminye imibala.
Unxantathu ngumdibaniso wemibala emi-3 eyenza unxantathu embindini wevili lombala. Ngaphandle kokwahluka okumangalisayo, bakha umbala olinganayo. Umzekelo weskimu sonxantathu sityheli, luhlaza okwesibhakabhaka nobomvu. Ngokujonga ukubekwa kwabo kwivili lemibala, singazoba unxantathu embindini ukuze senze unxantathu. Omnye umzekelo luhlaza, orenji, nemfusa.
Njengoko igama libonisa, olu luhlu lombala luthatha ukhuthazo kwindalo. Inkqubo yemvelo yendalo idala uyilo oluhambelanayo. Umzekelo sisityalo esidubula iintyatyambo esinamagqabi aluhlaza oqaqambileyo kunye neentyatyambo ezibomvu ezinegazi. Olubomvu noluhlaza kwivili lemibala kuthathwa njengokuhambelana. Omnye umzekelo yimfusa, luhlaza okwesibhakabhaka, orenji kunye nepinki enokufumaneka kwiintsiba zeentaka. Nangona le mibala ingalingani kwisikimu esithile, ihambelana kakuhle kwaye yenza ukuhambelana okuhle kwemibala.
Imibala engacacanga kunye esebenzayo
Imibala iguqulwa bubuchopho bethu bube yimvakalelo. Xa singena kwigumbi elithile, imibala yodonga kunye nokuhonjiswa kwayo kuchaphazela ngokuthe ngqo indlela esivakalelwa ngayo.
Imibala esebenzayo yimibala eqaqambileyo. Bazisa ukonwaba kwaye banxulunyaniswa namandla, ubuchule kunye nokuhamba. Imibala esebenzayo ithathwa njengemibala efudumeleyo. Imibala eshushu ibandakanya obomvu, orenji kunye notyheli. Endlwini, le mibala isetyenziselwa amagumbi anezinto ezinjengekhitshi, igumbi lokudlala labantwana, okanye umthambo wasekhaya. Zivuselela iingqondo zethu kwaye zisikhuthaza ukuba sihambe.
Imibala eshushu iguqulela uvuyo kunye nolonwabo. Umzekelo, ukwenza umxholo kajongilanga ekhitshini kuyenza ibonakale ikhanya, inelanga kwaye yonwabile. Mthubi ngumbala odumileyo weekhikhini. Ikwenza ukuba indawo ibonakale inkulu.
Imibala yokudlula ithathwa njengemibala epholileyo. Le mibala iyathuthuzela, iyathomalalisa kwaye iyonwabisa. Luhlaza okwesibhakabhaka nohlaza kuthathwa njengemibala epholileyo. Uninzi lwemibala engathathi hlangothi, okanye iithoni zomhlaba, ikwajongwa njengemibala engenziwanga. Zibonakala zikude ngakwimibala esebenzayo ngakumbi. Iiblues kunye nemifuno isikhumbuza ngolwandle okanye iintaba, ezithumela umqondiso kwiingqondo zethu ukuba kufuneka siphumle kwaye sipholile. Le mibala ihlala isetyenziswa kumagumbi ayilelwe ukuvuselela izivamvo ezinjengegumbi lokulala okanye igumbi lokuhlala.
Umzekelo ogqibeleleyo wemibala epholileyo kwigumbi likwi-spa. Ii-Spas zihlala zinemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza ngokungathathi hlangothi njengegrey, browns kunye nomhlophe. Le mibala ixelela iingqondo zethu ukuba zinciphise kwaye ziphumle. Amagumbi okucamngca ahlala enxulunyaniswa nemibala epholileyo. Banikezela ngemvelaphi efanelekileyo yokuphumla kwengqondo nomzimba.
Ukukhanya kunye nobushushu
Kwi-physics, imibala emnyama nemhlophe yenza umahluko ngokweqondo lobushushu. Kuyinyani ukuba umhlophe ubonakalisa ukukhanya kwaye umnyama uyakuthatha. Xa amandla okukhanya etsala, aguqulwa abe bubushushu.
Kwiindawo ezifudumeleyo, kungcono ukusebenzisa imibala epholileyo enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omhlophe, oluhlaza, kunye nomhlaba. Ngaphandle kwento yokuba zikhangeleka zipholile, zikwabonisa ubushushu ukusuka ekukhanyeni ukuze ubushushu kumagumbi nawo angcono. Umzekelo woku izindlu zaselwandle. Izindlu zaselwandle zifudumele ngenxa yokukhanya okuboniswa lulwandle. Nangona umoya ovela elwandle ubonakala upholile, ithiyori xa ukufutshane nolwandle ifudumele kunokuba ungene elizweni. Izindlu zaselwandle zihlala zipeyintwe kwaye zihonjiswe ngemibala epholileyo ngokuchaseneyo nemozulu eshushu.
Iindawo ezikwimozulu ebandayo ziyacetyiswa ukuba zisebenzise imibala efudumeleyo. Imibala eshushu ifunxa ubushushu obuveliswa kukukhanya, ke oko kwenza ukuba imeko-bume iphole kwaye isondele. Imibala eshushu yenza ukuba igumbi libe yiklasikhi ngakumbi kwaye lixesha. Thatha umzekelo wentaba ebuyayo. Izindlu phezulu ezintabeni zihlala zihonjiswe ngomthi omnyama, obovu bubomvu kunye nomdaka womhlaba. Banikezela ngemfudumalo kunye noxolo.
Ivili lemibala ayisiyiyo nje uluhlu lwemibala. Sisikhokelo esisetyenziselwa ukwenza iskimu sombala esisebenzayo. Isusa umsebenzi wokuqikelela ekukhetheni imibala kwaye inike umbono wokuba imibala iya kujongeka njani xa idityaniswe kunye. Oku akubalulekanga kuyilo lwangaphakathi kuphela, kodwa kwezinye iindlela zobugcisa kunye nezentengiso, imithombo yeendaba eprintiweyo njengeencwadi, kunye neefom zobugcisa ezinje ngemizobo.
Ukutshintsha imibala kunye nokungathathi cala
Nje ukuba kukhethwe umbala osisiseko, ngoku lixesha lokutshatisa lo mbala kunye nosapho olunye kwicala elikhanyayo okanye kwicala elimnyama ngokongeza umbala ongathathi hlangothi. Kuyilo lwangaphakathi, le nkqubo iba mbala, mthunzi kunye neethoni.
I-Tint ngumxube wombala osisiseko kunye nomhlophe. Olu dibaniso lwenza umbala wesiseko ube lula. Ukwenza umbala ube lula kukhanye ngakumbi. Le mibala ekhanyayo ikwabizwa ngokuba yimibala ye-pastel. Le mibala ithathwa njengemibala ezolileyo nezolileyo.
Iimpawu ziziphumo zokongeza abamnyama kumbala osisiseko. Umbala uba mnyama, ucebe ngakumbi kwaye ubukhali ngakumbi. Umnyama ngumbala onamandla, ke xa uwongeza kumbala osisiseko, kuya kufuneka uzame isixa esincinci ekuqaleni. Umnyama ayisiyiyo yodwa umbala onokusetyenziselwa ukunika umnyama mnyama. Eminye imibala emnyama enje nge-blues etyebileyo, grey, browns, kunye nemaroon inokwenza umbala wesiseko ube namandla ngakumbi. Eyona ndlela yokufezekisa umthunzi ogqibeleleyo kukuzama amanani amancinci amnyama okanye eminye imibala emnyama. Ukuba umbala uba mnyama kakhulu kwaye ulahlekelwe ngumbala wawo wokuqala, ungasoloko ukongeza intwana emhlophe kunye nombala wokuqala ukuyibuyisela ebomini.
Ithoni yenziwa ngokudibanisa zombini ezimnyama kunye nokukhanya kumbala. Ngamanye amaxesha, ingwevu ixutywe kumbala osisiseko. Kuxhomekeka kubungakanani bamnyama nomhlophe obongeziweyo, umbala osisiseko unokuba lula okanye ube mnyama. Isiphumo sombala ogcweleyo kwaye awuzinzanga kangako kumbala osisiseko. Kuyajongwa ukuba iithoni ziyinyani. Kwilizwe lokwenyani, imibala yethu ayinamandla njengaleyo ivili lemibala. Zininzi izinto ezichaphazela imibala esijikelezileyo, njengongcoliseko, imozulu kunye nezinye izinto zendalo. Iitoni zinokunika iimpawu ezifihlakeleyo nezintsonkothileyo zombala osisiseko.
Kwigumbi, kuyakhohlisa ukwenza ibhalansi yemibala eshushu nepholileyo. Kuhlala kungcono ukudibanisa ezi zinto zimbini kwaye ungagcini nje ekunciphiseni enye. Ingcebiso kukuba ukhethe umbala omnye wesiseko kuqala. Umzekelo, ufuna ukusebenzisa oluhlaza okwesibhakabhaka njengombala osisiseko. Yongeza imibala yemibala efudumeleyo ngokongeza imibala eyahlukileyo enje nge-vase emnyama, ityali ebomvu etyebileyo, okanye indibaniselwano yemiqamelo ekhanyayo kunye emnyama.
Ukwenza ibhalansi yezinto ezichaseneyo kugcina igumbi linomdla, likhululekile kwaye lingalibaleki. Vumela ivili lemibala kunye nendibaniselwano yayo ikukhokele ekuyileni indibaniselwano efanelekileyo yegumbi elifanelekileyo.
Izithuba ezinxulumene noyilo lwangaphakathi onokuzithanda:
Imibala yeGranite yeeComputer - Isoftware ebalaseleyo yoyilo lwangaphakathi - Uyikhetha njani iMibala yeCouch - Iinkqubo zesibonisi simahla sePeyinti
Isipho seminyaka eli-10 sesipho sanamhlanje